UMarco Polo - I-Biography efutshane
Biography yaseMarco Polo
Ngo-1260, abazalwana kunye nabathengisi baseVenice uNicolo noMatto Polo bahamba empumalanga bavela eYurophu. Ngo-1265, bafika eKaifeng, inkulu-dolobha yaseKublai Khan (eyaziwa ngokuba yi-Great Khan) i- Mongol Empire . Ngo-1269, abazalwana babuyela eYurophu ngesicelo sikaKhan sokuba uPapa ukuba athumele iincwadi ezilungileyo ezilikhulu kwiMongol yaseMongol, ekufuneka incede ukuguqula amaMongol ebuKristwini. Umyalezo kaKha wagqithiselwa uPapa kodwa akazange athumele abavangeli bevangeli.
Xa efika eVenice, uNicolo wafumanisa ukuba umfazi wakhe uswelekile, eshiya ukunakekelwa kwonyana, uMarco (owazalwa ngo-1254 kwaye wayeneminyaka elishumi elinesihlanu ubudala), ezandleni zakhe. Ngo-1271, abazalwana ababini noMarco baqalisa ukuhamba empuma kwaye ngo-1275 badibana noKhan Khan.
UKhan wayemthanda uMarco osemtsha waza wabhalela enkonzweni yoBukumkani. UMarco wakhonza kwizikhundla ezininzi ezikarhulumente eziphakamileyo, kubandakanywa njenge-ambassador kunye nekarhuluneli yesixeko saseYangzhou. Ngoxa i-Great Khan yayinomdla wokuba i-Polos njengezifundo zayo kunye nabadibanisi, uKhash wavuma ukuba avumele ukuba bashiye ubukhosi, nje kuphela xa beya kunika ikosikazi eyayikelwe ukutshata ukumkani wasePersi.
Iipolisi ezintathu zashiya uBukhosi ngo-1292 kunye nenkosikazi, iinqwelo ezilishumi elinesine iinqanawa ezinkulu, kunye nabanye abagibeli abangama-600 besuka echwebeni elisentshonalanga yeChina. I-armada yaya nge-Indonesia ukuya eSri Lanka nase-Indiya kwaye iya kwindawo yayo yokugqibela kwindawo yase-Hormuz ePersian Gulf.
Ukuthi, abantu abalishumi elinesibhozo kuphela basinda kwii-600 zokuqala, kubandakanywa neNkosana engazange athathe umtshato wakhe ngenxa yokufa kwakhe, ngoko watshata nendodana yakhe endaweni.
Iipolisi ezintathu zabuyela eVenice kwaye uMarco wajoyina umkhosi ukulwa nommandla wase-Genoa. Wabanjwa ngo-1298 waza wavalelwa eGenoa.
Ngoxa wayesetolongweni iminyaka emibini, wachaza ingxelo yokuhamba kwakhe ukuya kwintolongo eyayibizwa ngokuba nguRustichello. Kungekudala emva koko, i- Travels ye-Marco Polo yapapashwa ngesiFrentshi.
Nangona incwadi yePolisa ixubusha indawo kunye neenkcubeko (kwaye abanye abaphengululi bakholelwa ukuba akazange asondele empuma njengeChina kodwa wachaza kuphela indawo abahamba ngayo), incwadi yakhe yapapashwa ngokubanzi, iguqulelwe kwiilwimi ezininzi, kwaye kukho iikopi ezikhutshwe.
Incwadi kaPolisi iquka ii-akhawunti ezinamathele amadoda anemisila kunye namanqabunga abonakala ejikelezileyo. Le ncwadi yiphondo le-Asia. Ikwahlula kwizahluko ezibandakanya imimandla ethile kunye nePolves delves kwizopolitiko, ezolimo, amandla empi, ubutyebi, izenzo zesondo, inkqubo yokungcwaba kunye neenkolo zommandla ngamnye. I-Polo yazisa iingcamango zemali yamaphepha kunye namalahle aseYurophu. Kwakhona waquka iingxelo zesekondari zeendawo awazange azityelele, njengeJapane neMadagascar.
Inqaku eliqhelekileyo elivela kwi- Travels lifundwa:
Ngokubhekisele kwiSiqithi saseNicobar
Xa usuka kwisiqithi saseJava kunye nobukumkani be-Lambri, uhamba ngomkhumbi malunga neekhilomitha ezilikhulu elinamanci mahlanu, uze ufike eziqithini ezimbini, enye ebizwa ngokuba yiNicobar. Kule siqithi abanalo kumkani okanye oyintloko, kodwa bahlala njengezilwanyana.
Bayahamba behamba behamba behamba behamba, bobabini nabasetyhini, kwaye ungasebenzisi isicatshulwa santoni na. Bayabakhonza izithixo. Bayihlobisa izindlu zabo ngeenqatha ezide zelinen, ezixhomekeke kwiintonga njengento yokuhlobisa, ngokubhekiselele kuyo njengokuba sasingathanda iiparele, iingubo, isilivere okanye igolide. Izinkuni zizaliswe izityalo kunye nemithi ebalulekileyo, kuquka ii-cloves, i-brazil, kunye nekakhukhunathi.
Akukho nto inxulumene nayo ukuze sihambe siye kwisiqithi saseAndaman ...
Impembelelo kaMarco Polo ekuhlolisweni kwendawo yayininzi kwaye yayinempembelelo enkulu kuChristopher Columbus . UColumbus wayenayo ikopi yee-Travels kwaye wenza izichaso kwiimida.
Njengoko uP Polo wasondela ekufeni ngo-1324, wacelwa ukuba abuyele oko wayekubhalileyo kwaye wathi nje akazange axelele nesahlulo sento awayeyibone. Nangona abaninzi bebanga ukuba incwadi yakhe ingathembekanga, yayiyintlobo yeengingqi zeAsia zeengingqi ezininzi.
Nanamhla, "incwadi yakhe imele ihlale phakathi kweengxelo ezinkulu zokuhlola." *
* UMartin, uGeffrey and Preston James. Zonke iiNkcazo ezenzekayo: Imbali yeengcinga zeGeographical . Page 46.
I-Eid Al-Fitr ibhiyozelwa njani kwi-Islam?
Intshumayelo yeVangeli: UKristu Uxhomekeke okanye Uzimelele?
Yibambe iRimmas Harvest Ritual
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi 'Battre' (ukuya kuBetha)
Ukuthi 'Ngenxa' ngesiSpeyin
Yintoni Engalunganga Ngenkukhu?
USara Parker Remond, u-African American Abolitionist
UJohn Winthrop - UColonial American Scientist
Iingcebiso ezi-5 zokuFunda uShakespeare
I-Pepperdine GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Yintoni Umdlalo Ococekileyo kwi-Bowling?
Yiyiphi iSiteji esiRaked?
Abantu Ukukhangela I-Intanethi